पन्ध्र पृष्ठको मतपत्र, ८०० उम्मेदवार, कसरी हाल्ने मत ? « SahayatraTV -Nepal News Portal, Business, Hot News, Interview, Opinions, Politics, Science, Technology, Social, Media, Sports, Youth, Model Watch, Movies
Published on: 13 October, 2018 6:30 am
एजेन्सी । असोज–२७, आठ सयभन्दा बढी अनुहार छन् उम्मेदवारका । अनि मतपत्र १५ पृष्ठको । तर मत दिने हो एकजनालाई । अब कसरी हाल्ने मत ?
काबुलका मतदाताले आउँदो अक्टोबर २० मा हुने चुनावमा यस्तो समस्या झेल्दैछन् । अखबार–आकारको मतपत्र छ र त्यहाँ छापिएका ८०० जना उम्मेदवारको तस्बिरबाट मन परेका उम्मेदवारको खोजी गर्नुपर्नेछ । त्यो पनि एकजना मात्र ।
अक्टोबर २० मा अफगानिस्तानमा संसद्को तल्लो सदनको चुनावमा हुँदैछ । त्यस चुनावमा झण्डै दुई हजार ५०० जनाले उम्मेदवारी दिएका छन् । ढिलागरी आह्वान गरिएको अफगानिस्तानको संसद्को तल्लो सदन वोलेसी जिर्घामा प्रतिनिधित्वको निर्वाचनका लागि ठूलो सङ्ख्यामा उम्मेदवारी दिइएको छ ।
उनीहरुलाई १५ पृष्ठको त्यस मतपत्रबाट छानेर एकजनालाई मात्र मत दिन गाह्रो हुनसक्ने समाचारमा जनाइएको छ । काबुलबाट प्राप्त समाचारमा भनिएको छ त्यो मतपत्र एउटा ट्याबलोइड अखबारको आकारमा छ ।
यो मतदान प्रक्रिया बढी नै जटिल हुने देखिएको छ । जसका कारण उम्मेदवारहरुले मतदाताहरुलाई आफ्नो पहिचान दिन नम्बर याद गराएर प्रचारप्रसार गर्ने गरेका छन् । प्रचारका क्रममा उम्मेदवारहरुले मतपत्रमा आफ्नो तस्बिर कति पेजमा छ र कस्तो छ भनेर मात्र चिनाउने गरेका बताइन्छ ।
साथै उनीहरुले मतपत्रमा छापिएको आफ्नो तस्बिर पनि टेलिभिजन र पत्रिकामार्फत प्रचार गर्ने गरेका छन् । प्रचार सामग्रीमा उम्मेदवारहरुले ‘यो तस्बिर यति पेजमा छ हेर्नुहोला’ भनेर आफ्नो तस्बिर चिनाउने गरेका छन् ।
तर यस चुनावमा पनि पहिलेजस्तै तालिवान र इस्लामिक स्टेटले कारबाही गर्ने जनाएका छन् । उनीहरुले मतदान केन्द्रमा पनि हमला गरिरहेका छन् । उनीहरुले मतदान गर्न नजान सर्वसधारण नागरिकलाई भनिरहेका छन् ।
दुई आमाको गर्भमा बसेर जन्मियो बच्चा
काठमाडौं । माघ ०४, चिकित्साको क्षेत्रमा विश्वमा निकै ठूलो प्रगति भैरहेको छ । कैयौं पटक
पीएम कप क्रिकेटमा यी चार खेलाडी देखिने छैनन्
काठमाडौं । माघ ०४, कुनै पनि देशको क्रिकेट विकास गर्न र राष्ट्रिय टिम बलियो बनाउने